ကိုယ့်လက်နဲ့ လိုက်ဖက်မယ့်နာရီတစ်လုံးကို ဒီလိုရွေးချယ်မယ် - For her Myanmar
ကိုယ့်လက်နဲ့ လိုက်ဖက်မယ့်နာရီတစ်လုံးကို ဒီလိုရွေးချယ်မယ်
ကိုယ်နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ဒီဇိုင်းရွေးချယ်ဖို့ စဉ်းစားရခက်နေရင်ဖတ်ကြည့်ပါနော်
ဟိုးအရင်ခေတ်ကတော့ အချိန်သိချင်ရင် နေနာရီ၊ သဲနာရီ ၊ ကြက်တွန်သံ စသဖြင့် အမှတ်အသားတွေနဲ့ မှတ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့လေ…. နောက်ပိုင်းတော့ စက်နာရီတွေလည်း ပေါ်လာသလို ခုဆို ဖုန်းလေးတစ်လုံးနဲ့တင် ဘယ်အချိန်ရှိပြီလဲ စဉ်းစားနေစရာမလိုတော့တာမျိုးပေါ့… ဆိုပေမဲ့ ဘယ်လိုပဲ ဖုန်းတွေ၊ ကွန်ပျူတာတွေနဲ့ အချိန်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုဆို နာရီတစ်လုံး ဆင်ယင်ထားတာက လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဖက်ရှင်ကျမှုကို အတော်လေး အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်…
အချိန်သိရရုံဘဲမက ဖက်ရှင်ပါ ကျချင်ပါတယ်ဆိုကာမှ ကိုယ်နဲ့မလိုက်တဲ့ နာရီတွေ ပတ်မိရင်လည်း ဂွမ်းနေဦးမယ်.. ဆိုတော့ ယောင်းတို့နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ နာရီလှလှလေးတစ်လုံးကို ဘယ်လို ရွေးချယ်ရမလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေ သိထားဖို့ လိုလာပြီပေါ့… ဒါဆိုရင် အရင်ဆုံးလုပ်ရမှာက ယောင်းတို့ရဲ့ လက်ကောက်ဝတ်က ဘယ်လို အမျိုးအစားလဲ ခွဲခြားဖို့ပါပဲ။
လက်ကောက်ဝတ်ကို စင်တီမီတာကြိုးနဲ့ တိုင်းတာကြည့်ပါ။ ဒီလိုတိုင်းကြည့်လို့ လုံးပတ်က
၁၄ ကနေ ၁၆ စင်တီမီတာအတွင်းဆိုရင် သေးသွယ်တဲ့ လက်ကောက်ဝတ်၊
၁၆ ကနေ ၁၇ ဆိုရင် ဆလင်ဒါပုံစံ လက်ကောက်ဝတ်၊
၁၇ ကနေ ၁၈ ဆိုရင် အလယ်အလတ်ဆိုဒ် ဖြစ်ပြီး ၁၈ ရဲ့ အထက်ဆိုရင် ဆိုဒ်ကြီးပေါ့နော်။
ကိုယ့်ရဲ့ လက်ကောက်ဝတ်အမျိုးအစားကို သိသွားပြီဆိုရင်တော့ နာရီရွေးချယ်လို့ ရပါပြီ။
သေးသွယ်တဲ့ လက်ကောက်ဝတ်ပိုင်ရှင် ဆိုရင် နာရီဒိုင်ခွက်ကြီးတာ၊ လက်ပတ်ကြိုးအပြားကြီးတာတွေနဲ့ လိုက်ဖက်မှုမရှိပါဘူး။ ၃၈ မီလီမီတာရှိတဲ့ ဒိုင်ခွက်တွေက သေးသွယ်တဲ့ လက်ကောက်ဝတ်တွေနဲ့ လိုက်ဖက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်နော်။
Related Article >>> ကိုယ့်ဘရာဆိုဒ်အမှန်ကို အလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ ဒီလိုတိုင်းမယ်
ဆလင်ဒါပုံစံ လက်ကောက်ဝတ် ဆိုရင်တော့ နာရီဒိုင်ခွက်က ၄၀ မီလီမီတာရှိသင့်ပြီး နာရီအိုးကိုတော့ ၈ မီလီမီတာထက်ကြီးတာကို မရွေးချယ်သင့်ပါဘူးတဲ့…
အချိန်လည်း သိရ ဖက်ရှင်လည်းကျ
အလယ်အလတ် လက်ကောက်ဝတ် ပိုင်ရှင်တွေက ကံကောင်းပါတယ်။ တခြား လက်ကောက်ဝတ်အမျိုးအစားထက် သူတို့က ရွေးချယ်လို့ရတာ ပိုများပါတယ်။ ရှောင်သင့်တာကတော့ ကြီးလွန်းတဲ့ နာရီတွေနဲ့ သေးလွန်းတဲ့ နာရီတွေပါပဲ။
Related Article >>> သွားမယ့်နေရာကိုလိုက်ပြီး ဖိနပ်ရွေးချယ်မှု မှန်ကန်စေဖို့
လက်ကောက်ဝတ်ဆိုဒ်ကြီး ဆိုတော့ နာရီကြီးကြီးပဲ ဝယ်မယ်တော့ မလုပ်နဲ့နော်။ ကြီးတာနဲ့ လိုက်ဖက်တယ်ဆိုပေမဲ့ ၄၄ ကနေ ၄၆ မီလီမီတာကြား ဒါမှမဟုတ် အဲဒါထက် နည်းနည်းပိုကြီးတဲ့ ဆိုဒ်က ဒီလို လက်ကောက်ဝတ်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံးပါပဲ။
ဒီလောက်ဆိုရင် ယောင်းတို့နဲ့ လိုက်ဖက်မှုရှိတဲ့ နာရီတစ်လုံးကို ရွေးချယ်နိုင်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်နော်။ လှပတဲ့ နာရီတစ်လုံးနဲ့ အတူ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်ကာလတွေကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ကြပါစေလို့…
References : realmenrealstyle, thetrendspotter
ကိုယျနဲ့ လိုကျဖကျတဲ့ဒီဇိုငျးရှေးခယျြဖို့ စဉျးစားရခကျနရေငျဖတျကွညျ့ပါနျော
ဟိုးအရငျခတျေကတော့ အခြိနျသိခငျြရငျ နနောရီ၊ သဲနာရီ ၊ ကွကျတှနျသံ စသဖွငျ့ အမှတျအသားတှနေဲ့ မှတျခဲ့ကွတယျပေါ့လေ…. နောကျပိုငျးတော့ စကျနာရီတှလေညျး ပျေါလာသလို ခုဆို ဖုနျးလေးတဈလုံးနဲ့တငျ ဘယျအခြိနျရှိပွီလဲ စဉျးစားနစေရာမလိုတော့တာမြိုးပေါ့… ဆိုပမေဲ့ ဘယျလိုပဲ ဖုနျးတှေ၊ ကှနျပြူတာတှနေဲ့ အခြိနျကွညျ့လို့ရတယျဆိုဆို နာရီတဈလုံး ဆငျယငျထားတာက လူတဈယောကျရဲ့ ဖကျရှငျကမြှုကို အတျောလေး အထောကျအကူဖွဈစပေါတယျ…
အခြိနျသိရရုံဘဲမက ဖကျရှငျပါ ကခြငျြပါတယျဆိုကာမှ ကိုယျနဲ့မလိုကျတဲ့ နာရီတှေ ပတျမိရငျလညျး ဂှမျးနဦေးမယျ.. ဆိုတော့ ယောငျးတို့နဲ့ လိုကျဖကျတဲ့ နာရီလှလှလေးတဈလုံးကို ဘယျလို ရှေးခယျြရမလဲဆိုတဲ့ နညျးလမျးလေးတှေ သိထားဖို့ လိုလာပွီပေါ့… ဒါဆိုရငျ အရငျဆုံးလုပျရမှာက ယောငျးတို့ရဲ့ လကျကောကျဝတျက ဘယျလို အမြိုးအစားလဲ ခှဲခွားဖို့ပါပဲ။
လကျကောကျဝတျကို စငျတီမီတာကွိုးနဲ့ တိုငျးတာကွညျ့ပါ။ ဒီလိုတိုငျးကွညျ့လို့ လုံးပတျက
၁၄ ကနေ ၁၆ စငျတီမီတာအတှငျးဆိုရငျ သေးသှယျတဲ့ လကျကောကျဝတျ၊
၁၆ ကနေ ၁၇ ဆိုရငျ ဆလငျဒါပုံစံ လကျကောကျဝတျ၊
၁၇ ကနေ ၁၈ ဆိုရငျ အလယျအလတျဆိုဒျ ဖွဈပွီး ၁၈ ရဲ့ အထကျဆိုရငျ ဆိုဒျကွီးပေါ့နျော။
ကိုယျ့ရဲ့ လကျကောကျဝတျအမြိုးအစားကို သိသှားပွီဆိုရငျတော့ နာရီရှေးခယျြလို့ ရပါပွီ။
သေးသှယျတဲ့ လကျကောကျဝတျပိုငျရှငျ ဆိုရငျ နာရီဒိုငျခှကျကွီးတာ၊ လကျပတျကွိုးအပွားကွီးတာတှနေဲ့ လိုကျဖကျမှုမရှိပါဘူး။ ၃၈ မီလီမီတာရှိတဲ့ ဒိုငျခှကျတှကေ သေးသှယျတဲ့ လကျကောကျဝတျတှနေဲ့ လိုကျဖကျတယျလို့ဆိုပါတယျနျော။
Related Article >>> ကိုယျ့ဘရာဆိုဒျအမှနျကို အလှယျဆုံးနညျးနဲ့ ဒီလိုတိုငျးမယျ
ဆလငျဒါပုံစံ လကျကောကျဝတျ ဆိုရငျတော့ နာရီဒိုငျခှကျက ၄၀ မီလီမီတာရှိသငျ့ပွီး နာရီအိုးကိုတော့ ၈ မီလီမီတာထကျကွီးတာကို မရှေးခယျြသငျ့ပါဘူးတဲ့…
အခြိနျလညျး သိရ ဖကျရှငျလညျးကြ
အလယျအလတျ လကျကောကျဝတျ ပိုငျရှငျတှကေ ကံကောငျးပါတယျ။ တခွား လကျကောကျဝတျအမြိုးအစားထကျ သူတို့က ရှေးခယျြလို့ရတာ ပိုမြားပါတယျ။ ရှောငျသငျ့တာကတော့ ကွီးလှနျးတဲ့ နာရီတှနေဲ့ သေးလှနျးတဲ့ နာရီတှပေါပဲ။
Related Article >>> သှားမယျ့နရောကိုလိုကျပွီး ဖိနပျရှေးခယျြမှု မှနျကနျစဖေို့
လကျကောကျဝတျဆိုဒျကွီး ဆိုတော့ နာရီကွီးကွီးပဲ ဝယျမယျတော့ မလုပျနဲ့နျော။ ကွီးတာနဲ့ လိုကျဖကျတယျဆိုပမေဲ့ ၄၄ ကနေ ၄၆ မီလီမီတာကွား ဒါမှမဟုတျ အဲဒါထကျ နညျးနညျးပိုကွီးတဲ့ ဆိုဒျက ဒီလို လကျကောကျဝတျပိုငျရှငျတှနေဲ့ အလိုကျဖကျဆုံးပါပဲ။
ဒီလောကျဆိုရငျ ယောငျးတို့နဲ့ လိုကျဖကျမှုရှိတဲ့ နာရီတဈလုံးကို ရှေးခယျြနိုငျပွီလို့ ထငျပါတယျနျော။ လှပတဲ့ နာရီတဈလုံးနဲ့ အတူ တနျဖိုးရှိတဲ့ အခြိနျကာလတှကေို ကြျောဖွတျနိုငျကွပါစလေို့…
Tags: choose, Elegant, Fashion, Formal Fashion, Smart, Suitable, watch